ढुलमुल र अलमल हैन जवज नै ठिक हो - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
ढुलमुल र अलमल हैन जवज नै ठिक हो
कुनै पनि देशमा श्रमजीवी वर्गले राज्यसत्ताको नेतृत्व हातमा लिन नसक्दासम्म आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन । त्यसैले जनताको जनवादी कार्यक्रम लागू गर्न राज्यसत्ता प्राप्ति मुख्य विषय बन्नु स्वाभाविक हो ।
सत्ता प्राप्त नहुँदासम्म उसले सोहीअनुसार रणनीति र कार्यनीति तय गर्छ । तय गरिएका त्यस्ता नीतिबमोजिम अघि बढ्दा क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ र सत्तामा पुगेर श्रमजीवी वर्गले कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्ने गर्छ ।
जनवादी क्रान्तिको चरणमा श्रमजीवी वर्गले जनवादी कार्यक्रमलाई आफ्नो न्यूनतम लक्ष्य बनाएको हुन्छ । सो लक्ष्यसँगै समाजवादलाई अधिकतम लक्ष्यका रूपमा अपनाएको हुन्छ । लेनिन र माओत्से तुङलगायत विश्वका महान् नेतादेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तमाम नेताले यस सन्दर्भमा आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छन् ।
हरेक देशको परिस्थिति र सन्दर्भ विशिष्ट हुने भएकाले श्रमजीवी वर्गको पार्टीले राष्ट्रिय विशेषताका आधारमा न्यूनतम र अधिकतम कार्यक्रमको रूपरेखा र लक्ष्य तय गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशमा अर्को देशको हुबहु नक्कल गर्न सकिँदैन । त्यसकारण जनताको जनवाद र जनताको वहुदलीय जनवाद पार्टीको कुन आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रम हो नेपाली जनता अथवा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका श्रीसस्त नेता र जिल्ला स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ता प्रष्ट हुनु आज श्रमजीवी जनताको हित र प्रगति पथ प्रस्ट पार्ने माध्यम हुन सक्छ ।
जवज जस्ले वुझने प्रयत्न गर्यो उसले जवजको ब्याख्या बिश्लेषण र प्रयोग यो तवरबाट हुन्छ भन्ने मान्यता राख्यो । जनताको जनवादको बारेमा जजसले व्याख्या बिश्लेषण गर्नु भयो, आधार प्रमाण केही नदिने खालको भयो ।
जनताको जनवाद भन्ने मान्यता सर्वत्र ब्याप्त भयो अन्धो मान्छेले हात्ती छाम्दा कस्तो हुन्छ ? हो त्यस्तै जनताको जनवाद भयको होकी जनताको बहुदलीय जनवाद ? एकाइसौ शताब्दीको जनवाद ,जनताको जनवाद ,नेपाली माटोमा नेपाली राजनेता हरुले बिश्लेषण गरि वामपन्थी राजनेताहरुले प्रतिपादन गरेको कम्युनिस्ट राजनीतिक दस्तावेज धेरै छन् । जसमध्ये जसरी जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादमा प्रष्टसंग बिबिध राजनीतिक ब्यवस्थापनका क्षेत्र शासन ब्यवस्था कस्तो हुने स्पष्ट छ । त्यहाँ
नागरिकका मौलिक हक अधिकार कति र कस्तो हुने
कार्यपालिका न्याय पालीका र ब्यवस्थापिका कसरी संचालन हुने
नागरिकको बोल्न र बाच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने
जस्ता विषयवस्तुलाई स्पष्ट पारिएको छ ।
रचनात्मक र श्रृजनात्मक बिषयलाइ जवजले आत्मा साथ र संवोधन गरेकोले वास्तविक श्रमजीवी जनता निम्न मध्यम बर्ग र मध्यम बर्गले जवजलाई आत्मासाथ गर्दैअगाडी बडछन भन्ने आम कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता सुवेक्षक सुभचिन्तक र न्यायप्रेमी नेपाली जनताको बुझाइ सत्यसाबित हुन्छ ।
अन्धो मान्छेको अगाडि हात्ती छामेर ब्याख्या गरे जस्तो सिदान्त अथवा नीति कार्यक्रम प्रष्ट नहुँदासम्म, अन्धा धुन्न कोही पनि अन्धभक्त भएर अगाडि बडने सम्भावना नहोला ।
अतः बर्तमान शन्दर्भमा आउँदा जवजले नेपाली मौलिक क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको स्पष्ट नै छ । जनताको जनवाद भन्नेहरुले कित आफ्नो मार्ग दर्शनको औचित्य पुष्टि गरौं हैनभने जवजको सत्यतालाई स्विकार गरौं ।
कन्जुसाई र पूर्वाग्रहको शिकार कोहीपनि नहौं । आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा चियाको कपमा तुफानी आँधी ल्याउन खोजियो भने ठोस कार्यदिशाको अभावमा गति लिएको राजनीतिक यात्रा र उपलब्धीले धक्का नखाला भन्न सकिन्न ।
विकास को बाधक बन्यो काङ्ग्रेस, ९ करोड बजेट कामै नगरी फ्रीज